महरा आज रिहा हुँदै ! फोरन्सिक टेष्ट पनि मिलेन — onlinedabali.com
महरा आज रिहा हुँदै ! फोरन्सिक टेष्ट पनि मिलेन
शुक्रबार महराले बयनको क्रममा आफूमाथि आलोको आरोप झुट भएको दाबी गरेका थिए । उनले जाहेरीमा भनिए झैं आफूले रक्सी नपिउने दाबी गर्दै आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका कारण अभियोग लगाइएको बताएका थिए । बयनको क्रममा महराले आफूलाई फसाउन षड्यन्त्र भएको दाबी गर्दै आफूलाई कसैमाथि हातपात समेत नगरेको बताएका थिए ।
शाहीसँग पारिवारिक सम्बन्ध भएको बताउँदै महराले बयनको क्रममा महराले स्वास्थ्य प्रतिकूलताका कारण शाहीले अस्पतालमा उपचार गराएको जानकारी पाएपछि विक्षिप्त अवस्था आउन नदिन सम्झाउन निजी गाडीमा सुरक्षाकर्मीसहित उक्त इलाकामा गएपनि कोठामा नपुगेको बताएका छन् । फोन सम्पर्क नभएपछि आफू फर्किएको बहराले बयन दिएका छन् ।
आज दिउँसो हुने बहसमा महराको तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवासायीले महरा धरौटीमा छुट्ने दाबी गरेका छन् । पीडित भनिएकी महिलाले नै उक्त आरोपको खण्डन गरिसकेको अवस्थामा महरालाई निर्दोष रहेको दाबी उनीहरुको छ ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार महराको फोरन्सिक ल्यावको रिपोर्ट पनि आइसकेको र आरोप प्रमाणित भएको छैन । अब महरालाई हिरासतमा राखेर भन्दा धरौटीमा रिहा गरेर बाँकी अनुसन्धान गर्न सकिने प्रहरीको सुझाव रहेको बताइएको छ ।